ချင်းရိုးရာပွဲတော်များတွင် ချင်းရိုးရာဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်သူ များလာသဖြင့် ဂျပ်ခုတ်ထဘီနှ? - Yangon Media Group
ချင်းရိုးရာပွဲတော်များတွင် ချင်းရိုးရာဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်သူ များလာသဖြင့် ဂျပ်ခုတ်ထဘီနှ?
ဟားခါး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ချင်းရိုးရာ အဆင်ဂျပ်ခုတ်ထဘီနှင့် ရိုးရာဝတ်စုံများကို ချင်းအမျိုးသားနေ့ပွဲတော်နှင့် ချင်းရိုးရာပွဲတော်များတွင် ဝတ်ဆင်သူများလာသဖြင့် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့များတွင် ဂျပ်ခုတ်ထဘီရက်လုပ်သူနှင့် လက်ရက်ကန်းရက်လုပ်သည့် မျိုးဆက်သစ်အမျိုးသမီးဦးရေ ယခင်ထက်များပြားလာကြောင်း သိရသည်။
ချင်းရိုးရာအမျိုးသမီးဝတ်ထဘီနှင့် အင်္ကျီများကိုရှေးယခင်က ချင်းတောင်ပေါ်၌သာ ဂျပ်ခုတ်အထည်အဖြစ် ရက်လုပ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကလေးမြို့နှင့် ဂန့်ဂေါမြို့ရှိရက် ကန်း ရုံများမှ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရက်လုပ်ရောင်းချကြသောကြောင့် လက်ရက်ထည်များ ဈေးကွက်ရရှိလာကြသည်။ ”ချင်းရိုးရာအမျိုးသမီးဝတ်ဂျပ်ခုတ်ထဘီကို ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပွဲတော် နှစ်ကူးပွဲခရစ္စမတ်ပွဲနဲ့ မင်္ဂလာပွဲများမှာ ဝတ်တာများလာ တယ်။ ချင်းအမျိုးသမီးတိုင်း ပွဲတက်ဝတ်စုံအဖြစ် ကိုယ့်ရိုးရာဝတ်စုံကို အမြတ်တနိုးဝတ်ကြတဲ့အပြင် မြန်မာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသူအများစုကပါ ဝတ်ဆင်မှုရှိလာတာကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ကလေး၊ တမူးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ ချင်းရိုးရာအထည်ဆိုင်တွေရှိနေပါ ပြီ”ဟု ဟားခါးမြို့မှ ချင်းရိုးရာဂျပ်ခုတ်အထည်ရက်လုပ်သူ မကျင်နိုးရ်က ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ ဂျပ်ခုတ်အထည် ဝတ်ဆင်သူများလာသဖြင့် အမျိုးသမီးငယ်များမှာ အမျိုးသမီးကြီးများထံမှချင်းရိုးရာအမျိုးသမီးဝတ် ဂျပ်ခုတ်ထဘီများကို ရက်လုပ်သည့် နည်းပညာကိုသင်ယူကြကာ ရက်လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးဝတ်များမှာ အဆင်ပေါ်လိုက်၍ကျပ်နှစ်သိန်းမှ ကျပ်ဆယ်သိန်းအထိ ရောင်းဈေးရှိသည့်အပြင် အမျိုးသမီးဝတ်ဂျပ်ခုတ်ထည်များကို ပြည်တွင်းဝတ်ဆင်သူများက ကြွေစေ့ဖြင့်အလှ ဆင်ခြင်းငွေထည်ပစ္စည်းဖြင့်အလှဆင်ခြင်းများကြောင့် ကျပ်သိန်း ၂ဝမှကျပ်သိန်း ၅ဝကျော်အထိ ပင်ရောင်းဈေးရှိကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးမှ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေကြွေးကျန် တစ်နိုင်ငံလုံး ကြွေးကျန်ပမာဏ၏ ၅၂ ??
ကျေးရွာ ကိုးရွာ မီးလင်းရေးအတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကိုကျော်၍ ငွေကျပ် ၂ဝ၉၉ ဒသမ ၈၂၅ သန်းဖြင့် ဓာတ်အား??
‘တစ်နေ့မှာ မောင့်ကို ဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြရဦးမယ်’ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်
၀န်ထမ်းများကို အငှားအိမ်ရာများတွင် နေရာပေးထားခြင်းသည် အပိုင်ပေးခြင်းမဟုတ်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်သတိပေး
ထိုင်းတွင် အစိုးရ ဆန္ဒပြသူများ ဘန်ကောက်မြို့တွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် ဆန္ဒပြ
အစိုးရလိုလားသော မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို သက်ဆင် သရော်